Introduction | Outboard Boat Motor Mmezi
M na-echeta obi ụtọ na-eto eto na 1960 na-emefu oge ezumike na nna nna m na Southern Indiana. Nna m ochie bụ onye ọrụ Kentucky na-egwupụta egwu ma mesịa gbaa ezumike nká site na Chrysler Motor Corporation dị ka ndị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-ele ọtụtụ dị ka ndị nwere nkà. Ọ bụkwa onye na-akụ azụ nke kachasị mma m zutere. Nna m ochie nwere obi ụtọ na ọ na-ejide azụ na ezumike ya, tinyere ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na oyi na azụ na ọtụtụ ụbọchị n'oge okpomọkụ. Nna nna m megharịrị obere ụgbọ oloko n'ime ụgbọ ala ụgbọala ya naanị n'oge okpomọkụ. Ndị mmadụ si n'ebe niile bịa iji mee ka ha na-arụ ọrụ. Echere m na o mere nke a ka ọ bụrụ na ọ hụrụ ịhụnanya n'anya n'ihi na ọ naghị akwụ ụgwọ dị ukwuu maka ọrụ ya. Echetara m na-enyere ya aka n'ụtụtụ na n'ehihie n'ehihie na-arụ ọrụ na nku osisi, na-egbutu ahịhịa, na-elekọta ubi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ a chọrọ iji mee ka ọ nweere onwe ya ịga azụ azụ n'ehihie. Mgbe ezumike nká, nna nna m zụtara 16-ụkwụ aluminum johnboat na ohuru Evinrude 3 hp Lightwin motor bụ nke zuru okè iji duru olulu ndị ahụ na-aga na-aga azụ na azụ. Ihe mbụ m chetara banyere ụgbọ mmiri na motọ sitere na ụbọchị ndị a. Ọ na-eju m anya na ọ dị mfe ka ụgbọala ya malite na otú ha si agba ọsọ. Ọ na-enwekwa ọkụ ọkụ na-agbanye Lawn Boy nke malitere n'oge ọ bụla na nke mbụ a dọtara ya, ọ bụkwa onye ọkụ ọkụ kachasị mma m jiri. Ugbu a ka m ghọtara na otu ụgbọ mmiri Evinrude na ụgbọ mmiri Lawn Boy bụ otu ụgbọ mmiri a na-akpọ Outboard Marine Corporation na-ejikọta ya na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ.
Nna nna m bụ nwoke nwere nkà. Ọ bụghị onye bara ọgaranya, ma ọ gara nke ọma, ya na talent ya ma rụpụta ọtụtụ ihe. Ọ wuru ọtụtụ obere ụgbọ mmiri na-akụ azụ. Ọ bụ ọkà n'ịkwadebe nkà ma wuo ọtụtụ ụlọ. Ọbụna o mepụtara ma mee ka ọ bụrụ onye na-eme mkpọtụ tupu onye ọ bụla anụtụla ihe dị otú ahụ. O kegidere ya na-eji ọkụ na-egbu ya ma debe anyị niile maka ịkụ azụ. O nwere ekele dị ukwuu maka ihe ndị mepụtara mere ka ndụ ya ka mma. Ọ tụrụ ya n'anya na ọkụ lantern ya na ọkụ stool ọ na-eji maka ịma ụlọikwuu. Ọ nwere ụgbọala na-agba ígwè eletrik Silvertrol bụ nke dị jụụ maka ịkụ azụ n'akụkụ iyi. Ụgbọ mmiri ọgbara ọhụrụ ya dị mfe maka otu nwoke ka ọ na-ebu ibu na ibudata ya n'olu ụgbọ oloko ya. Ọ na-enwekwa obi ụtọ na Ocean City #90 akpaka ụgbọ elu n'ihi na o jiri oge ya na-etinye mkpara mkpara otu aka ma na-agba bọmbụ na-agbagharị na nke ọzọ. O chere na Mr. Coleman mere ezigbo onye nlekota oyi nke na-edebe ihe ọṅụṅụ anyị n'oge oyi, ma Mr. Evinrude mere 3-hp Lightwin ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri nke dị mfe iburu ma rịgoro n'ụgbọ mmiri ya.
Ugbu a na m nọ na 50, enwere m ekele maka ụbọchị ọma m toro. M ka na-etinye oge na-agbaso omenala ofufe na nna m na ụmụ m. Ngwa anyị nwere taa bụ ihe ọhụrụ, dị elu, ibu, na ihe kachasị ọnụ. Enweela m ọganihu na m nwere ike ime ihe nna nna m na-agaghị emeli, mana ihe ọ bụla na-efu. Ana m akpọrọ ụmụ m nwanyị na nwa na-azụ azụ, dịkwa ka ụmụaka ọ bụla nwere ohere, ha nile nwere mmasị ịkwọ ụgbọ mmiri ahụ. N'ụzọ ụfọdụ, ha anaghị enweta ahụmịhe dị otú ahụ na ike dị elu, nkà na ụzụ dị elu, engine anọ nke strok m nwere n'ụgbọ mmiri m. Mụ na nwa m nwoke nọ na Boy Scouts, mụ onwe m bụkwa onye ndụmọdụ maka gburugburu ebe obibi Science Environment. Otu n'ime ọdọ mmiri ndị m chọrọ ka ndị scouts nwere nkwụsị 10-hp ka m wee chọpụta na m nwere obere obere moto. Otu enyi m na-achọpụta ihe m chọrọ ime na ndị na-agụ egwú nyere m otu obere motọ na o kwuru na ya emeela agadi iji dọpụta eriri ahụ ka ha malite. Mkpụrụ a bụ 1963 Evinrude 3 HP Lightwin nke m hụrụ n'anya ozugbo n'ihi na ọ dị ka m na-echeta nna nna m nwere, yana 1958 Johnson 5.5 HP Seahorse. Amaara m na ihe ndị a bụ ihe ndị e ji eme ihe. Mkpụrụ a na 1996 Johnson 15 hp na ejiri m nọrọ, ebe ọ bụ na ọ dị oke ọnụ iji rụzie, nyere m ihe ịma aka m chọrọ maka oge oyi nke ọma na-arụ ọrụ.
Nna nna m na-agwa m mgbe niile, ana m echeta ya nke ọma, na "Ọ bụrụ na ihe niile agbakọta ma gbanwee n'ụzọ ziri ezi, ọ ga-aga nke ọma." "Ọ bụrụ na ọ gaghị amalite ma ọ bụ na-agba ọsọ nke ọma, mgbe ahụ enwere nsogbu ị ga-achọta na idozi ma ọ bụ nụ." Nke a bụ otu n'ime eziokwu ndị dị na ndụ ọ kụziiri m. Mgbapu, mmanụ ụgbọala, na mkpakọ bụ isi ihe atọ dị mkpa iji mee ka ọgba tum tum.
Olileanya m bụ ịdekọ ụda nke ihe ndị a site na ịdebe foto na nkọwa na ebe nrụọrụ weebụ a n'ụzọ dịka ọ pụrụ ịbụ ihe enyemaka maka onye ọ bụla nwere moto yiri nke chọrọ obere mmezi ma ọ bụ nụ. M ga-edepụta akụkụ ụfọdụ na nọmba katalọgụ m na-eji ma gwa gị kpọmkwem ihe ị chọrọ. Enwere m olileanya ime usoro ihe ndị a na-eji ngwa ngwa na ngwaọrụ nyocha. Ị nwere ike ịnwe otu n'ime ndị agadi Evinrude ma ọ bụ Johnson outboard motors gburugburu nke ị ketara ma ọ bụ nweta. O nwere ike ma ọ bụ na ọ gaghị agba ọsọ kama ọ nwere ohere ọ ga-eme ka ọ gbanye ọsọ ọsọ na ụda zuru ezu. Ị nwere ike ịmasị akụkụ ọ bụla ị chọrọ maka ụgbọala ochie site na e-Bay ma ọ bụ na Ịntanetị n'ozuzu. Anyị nwere njikọ ebe ị nwere ike ịzụta ọtụtụ akụkụ na Amazon.com. Site na iji Amazon, anyi nwetara obere oru nke na enyere aka kwadoo ebe a na oru ndi ozo. Ọ bụrụ na ị nwere agadi na njedebe, ịkwesịrị igbụ ya tupu i tinye ya n'ọdọ mmiri ma chere na ọ ga-ere ọkụ ma na-agba ọsọ. Enweghị ezigbo ụda olu, ị nwere ike ibibi ihe dị mma na ịchọta onwe gị. Ọ na-ewe ihe dịka $ 100 n'akụkụ na ọrụ ụfọdụ a raara nye iji mee obere ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na-agba ọsọ dịka o mere mgbe ọ dị ọhụrụ. Amụtara m na akụkụ ụfọdụ nke akụkụ ndị a na-achọ ka a dochie anya ya, ọ bụrụgodị na echekwara moto ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma ruo ogologo oge. Ụfọdụ akụkụ ndị na-anọchi anya dị elu karịa akụkụ mbụ ahụ nke na-eji dochie ha ga-enyere gị aka. Ọchịchọ m abụghị iji weghachite motọ ndị a ruo n'ókè nke na ha na-egosi mpempe akwụkwọ, mana iji kwụsị ihe m nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ afọ. E nwere ndị gbara ha gburugburu bụ ndị na-edozi ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ochie ruo n'ókè ebe ha na-egosi mpempe ma nye ha maka ire ere.
Ọ ga-efu ọgaranya iji mee ka ụgbọala ndị a guzosie ike n'otu ụlọ ọrụ na-ere ahịa ụgbọ mmiri. A gwawo m site na ebe ole na ole na ndị agadi na-abaghị uru na ha nwere mmasị ịzụ m moto ọhụrụ. Ebe ndị ọzọ ga-agwa gị na ha adịghị arụ ọrụ na motọ ndị karịrị 10 ma ọ bụ 20 afọ. N'eziokwu, ihe ndị a na-adị mfe ịmalite na onye ọ bụla nwere oge, ndidi, na obere ọrụ nwere ike ịchọta ma gbasaa nke ọma na obere ego. Ozugbo i mezue otu n'ime ọrụ ndị a ma ịkụ ya ọkụ maka oge mbụ, ị ga-enwe afọ ojuju dị ukwuu n'ịmara na ị mere ka ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri gị ochie Evinrude ma ọ bụ Johnson na-agba ọsọ nke ọma.
Biko PỊA EBE A na-agụ banyere ihe dị gị mkpa tupu ị malite gị oru ngo.